Maahmaahyadii 31 SOM - Erayadii Boqor Lemuu'eel - Kuwanu - Bible Gateway
Maahmaahyadii 30Wacdiyahii 1
Maahmaahyadii 31 Somali Bible (SOM)
Erayadii Boqor Lemuu'eel
31 Kuwanu waa erayadii Lemuu'eel oo ahaa boqorkii Masaa ay hooyadiis bartay isaga.
2 Waa maxay, wiilkaygiiyow?
Waa maxay, wiilkii uurkaygow?
Waa maxay, wiilkii nidarradaydow?
3 Xooggaaga naago ha siinin,
Dawyadaadana ha siinin kuwa boqorrada dumiya.
4 Lemuu'eelow, uma eka boqorrada, uma eka boqorradu inay khamri cabbaan,
Oo amiirradana uma eka inay waxa lagu sakhraamo damcaan,
5 Waaba intaasoo ay cabbaan, oo ay sharciga illoobaan,
Oo ay kuwa dhibaataysan midkood gartiisa qalloociyaan.
6 Waxa lagu sakhraamo siiya ka dhimashada ku dhow,
Oo khamrigana waxaad siisaan kuwa naftoodu la qadhaadhaatay.
7 Ha cabbo, oo caydhnimadiisa ha illoobo,
Oo dhibaatadiisana yaanu mar dambe soo xusuusan innaba.
8 Afka u fur carrablaawaha aawadiis,
Si aad kuwa baabba'aya oo dhan u xaq mariso.
9 Afka fur, oo si xaq ah u garsoor,
Oo miskiinka iyo saboolka baahanba gartooda u qaad.
Naagta Dabiicadda Wanaagsan Leh
10 Bal yaa heli kara naag wanaagsan?
Waayo, qiimaheedu waa ka sii badan yahay xataa luul.
11 Waayo, qalbiga ninkeedu iyaduu isku halleeyaa,
Oo isagu innaba uma baahnaan doono wax booli ah.
12 Cimrigeeda oo dhan isaga wanaag bay u samayn doontaa,
Oo innaba xumaan kuma samayn doonto.
13 Waxay doondoontaa dhogor idaad iyo geed linen la yidhaahdo.
Oo iyadoo raalli ku ah ayay gacmaheeda ku shaqaysaa.
14 Iyadu waa sida doonniyaha baayacmushtariga,
Oo cuntadeeda waxay ka keentaa meel fog.
15 Waxay kacdaa iyadoo weli ay habeennimo tahay,
Oo dadka reerkeeda ayay cunto siisaa,
Oo gabdhaheedana hawshooday siisaa,
16 Iyadu waxay ka fikirtaa beer, wayna soo iibsataa,
Oo midhaha gacmaheeda ayay beercanab ku beerataa.
17 Waxay dhexda ku xidhataa xoog,
Oo gacmaheedana way xoogaysaa.
18 Waxay eegtaa in baayacmushtarigeedu wanaagsan yahay;
Laambaddeeduna habeenkii ma bakhtido.
19 Waxay gacmaheeda ku fidisaa dunmiiqa,
Oo sacabbadeeduna waxay qabtaan usha wareegta.
20 Waxay sacabkeeda u furtaa miskiinka,
Oo gacmaheedana waxay u fidisaa saboolka baahan.
21 Dadka reerkeeda ugama cabsato dhaxanta barafka cad,
Waayo, xaaskeeda oo dhammu waxay wada qabaan dhar labanlaab ah.
22 Waxay samaysataa durraaxado daabac leh,
Oo dharkeeduna waxaa weeye dhar aad u wanaagsan oo guduudan.
23 Ninkeedana waxaa laga yaqaan irdaha magaalada,
Markuu dhex fadhiisto waayeellada waddanka.
24 Waxay samaysaa dhar wanaagsan, wayna iibisaa,
Oo baayacmushtarigana waxay ka iibisaa boqorro dhexda lagu xidho.
25 Xoog iyo sharaf ayaa iyada dhar u ah;
Oo wakhtiga soo socda way ku qososhaa.
26 Afkeeda waxay u kala qaaddaa xigmad;
Oo carrabkeedana waxaa saaran sharciga raxmadda.
27 Waxay aad u xannaanaysaa reerkeeda,
Oo kibista caajisnimadana ma cunto.
28 Carruurteedu way kacaan oo waxay ugu yeedhaan tan barakaysan,
Oo weliba ninkeeduna wuu ammaanaa, isagoo leh;
29 Dumar badan baa wanaag sameeyey,
Laakiinse adigu waad ka sii wanaagsan tahay dhammaantood.
30 Suuradwacnaantu waa khiyaano miidhan, oo quruxduna waa ceeryaamo oo kale,
Laakiinse naagtii Rabbiga ka cabsata waa la ammaani doonaa.
31 Midhihii gacmaheeda wax ka siiya,
Oo shuqulladeeduna iyada ha ku ammaaneen irdaha magaalada.